SuPwar Deposit Account - KBZ Bank
EXCHANGE RATES 10/19/2018
USD BUY 1575 SELL 1583
SGD BUY 1135 SELL 1150
THB BUY 47.5 SELL 48.5
EUR BUY 1748 SELL 1803
Home » SuPwar Deposit Account
စုပွားသည် သာမန်ငွေစု စာအုပ်များထက် အတိုးနှုန်းပိုမိုရရှိစေမည့် ငွေစုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ စုပွား၏ ရည်ရွယ်ရင်းမှာ နောင်ရေးအတွက် ပိုမိုခိုင်မာသောအနာဂတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ စုပွားဖြင့် သား၊သမီးများ၏ပညာရေးအသုံးစရိတ်၊ တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်၊ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်၊ ကား(သို့)အိမ်ဝယ်ရန်၊ အလှူမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများကျင်းပဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အခြားအခြားသောရည်ရွယ်ချက်ဆန္ဒများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှအထူးဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် စုငွေတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
ငွေစုပုံစံ (၂) မျိုး
စုပွားဖြင့် ငွေစုလိုသော Customer များအနေဖြင့် လစဉ်ပုံမှန်ငွေစုဆောင်းသော Regular Type နှင့် ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် အစီအစဉ်များဖြင့် ကာလရည်မှန်းချက်ထား၍ စုဆောင်းသော Target Type ဟူ၍ပုံစံ (၂)မျိုး ရွေးချယ်စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
စုပွားဖြင့် ငွေစုထားသူများအနေဖြင့် လစဉ် (၁)နှစ်စုဆောင်းလျှင် ၉.၂၅%၊ လစဉ် (၂)နှစ်စုဆောင်းလျှှင် ၉.၅၀%၊ လစဉ် (၃)နှစ်စုဆောင်းလျှှင် ၁၀% စသဖြင့် ပုံမှန်အတိုးနှုန်းများထက် ပို၍အတိုးခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
လစဉ်အတိုးတွက်ချက်မှုများတွင် အတိုး အရင်းပေါင်းထည့်၍ တွက်ချက်ပေးခြင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငွေစုဆောင်းမှုရပ်တန့်သွားခဲ့သည်ရှိသော် အတိုးခံစားခွင့်နစ်နာမှုမရှိစေရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်သွားပါက စုပွားသည် လစဉ်ပုံမှန်ငွေသွင်းရသော စုငွေပုံစံဖြစ်တာကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငွေသွင်းစုဆောင်းရမည့်ရက်ကျော်လွန်သွားပါက Grace Period5working Days ဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း ထို (၅)ရက်ကျော်လွန်သွားပါက Future+ စုပွား စာရင်းပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စုဆောင်းခဲ့သည့်ကာလအတွက် ငွေစုဘဏ် စာရင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း 8% ဖြင့်တွက်ချက်၍ အရင်းနှင့်အတိုးငွေ များကို ချိတ်ဆက်ထား သည့် စာရင်းထဲသို့အရောက်ပေးသွင်းသွားပါမည်။
Calculation of Future Amount from Monthly Saving Amount
Monthly Saving Amount
Duration (Years) 1 Year2 Year3 Year
Calculation of Monthly Saving Amount From Target Amount
Why choose this SuPwar Deposit Account?
Calculate interest on the daily balance.
You can still access your money outside of the fixed dates of withdrawals
Open an account by yourself or with someone else
ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသော မည်သူမဆို စာရင်းဖွင့်မည်ဆိုပါက မိမိကိုယ်တိုင် ကမ္ဘောဇဘဏ်သို့ သွားရောက်ရန်လိုအပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ရှိရပါမည်။
Download SuPwar E-Phamplet